मेक्सिको-अमेरिका सीमाको त्रासदीः संसारलाई स्तब्ध बनाउँदै बाबु-छोरीको शव
scheduleबुधवार मंसिर ४ गते, २०७६
एजेन्सी, ११ असार । सोमबार अमेरिका र मेक्सिको सीमा नजिकै घटेको एक घटनाले सारा विश्वको ध्यान तानेको छ ।
अमेरिका र मेक्सिकोको सीमा रहेको रियो दि ग्रान्डे नदीमा एक जना बाबु र छोरी मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । मृतक बाबु अलबर्टो मार्टिनेज र उनकी छोरी एन्जी भ्यालेरिया रहेको प्रहरीले बताएको छ । मृतक दुवै साल्भाडोरका हुन् ।
मेक्सिको हुँदै अमेरिका जान खोज्ने आप्रवासीहरु निकै जोखिममा छन् भन्ने कुरा उक्त तस्बिरबाट प्रस्ट हुन्छ । आप्रवासीको मानवीय पीडालाई गणितीय तथ्याङ्क र कडा नीतिका आधारमा हेरिने कुरा क्रुर र अमानवीय छ भनेर समेत यसले देखाउँछ ।
मेक्सिकोको सीमा हुँदै लुकेर अमेरिका जान खोज्दा मार्टिनेज र भ्यालेरियाले रियो ग्रान्डेमा आइतबार डुबेर ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरुको शब सोमबार टेक्सास नजिकै नदी छेउमा भेट्टिएको थियो । भ्यालेरियाको उमेर २ वर्ष भएको समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
मेक्सिकोका पत्रकार जुलिया लि डुसले मृतक बाबु र छोरीको तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गरेका थिए । मृत बाबु र छोरीको तस्बिर निकै दर्दनाक देखिन्छ । भ्यालेरिया बाबुको टिशर्टभित्र मृत अवस्थामा थिइन् । उनको दायाँ हात मार्टिनेजको घाँटीमा रहेको थियो ।
यो फोटोले ३ वर्षीया बालक एल्यान कुर्डीको स्मरण गराएको छ । कुर्डीको शव टर्कीको सामुन्द्रिक तट नजिकै भेट्टिएको थियो । भ्यालेरी मार्टिनेजको तस्बिरले आप्रवासीसम्बन्धी नीतिलाई पुन: बहसमा ल्याएको छ ।
मार्टिनेज र भ्यालेरीको ज्यान गएको समाचार बाहिर आएलगत्तै साल्भाडोरका विदेशमन्त्री अलेक्सान्द्रा हिलले आफ्ना नागरिकलाई देशमा बस्न र रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर अमेरिका छिर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने हिलले बताएकी छन् ।
केही महिनादेखि अधिकारीकर्मीले मेक्सिकोको सीमा पार गरेर अमेरिका जाने आप्रवासीको जीवन जोखिममा रहेको बताउँदै आएका छन् । कडा अमेरिका नीतिका कारण जोखिमपूर्ण स्थानबाट मानिसहरु प्रवेश गर्न खोज्दा ज्यान जाने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
अमेरिका र मेक्सिकोclose
ह्वाइट हाउसका कर्णेलले दिए ट्रम्पविरुद्ध बयान
सवारी दुर्घटना : ९ महिनामा १४ सय जनाको मृत्यु
अमेरिकालाई चीनको चेतावनी- ‘दक्षिणी चिनियाँ सागरमा दादागिरी बन्द गर’
उत्तरी सियाचिनमा हिमपहिरोमा परी ६ जनाको मृत्यु
डढेलोका कारण धुवाँले ढाकियो सिड्नी, प्रदूषण खतरनाक तहमा
रूसको नियन्त्रणमा रहेको यूक्रेनी पानीजहाज फिर्ता
भारतको ४७औं प्रधानन्यायाधीश बने बोब्डे
फुटबल हेर्न भेला भएकामाथि गोली प्रहार, ४ को मृत्यु
बोलिभियामा राजनीतिक संकट गहिरिँदै, वार्तामार्फत् समाधान गर्न राष्ट्रसंघको अपिल
हङकङका प्रदर्शनकारीद्वारा प्रहरीमाथि पेट्रोल बम र बाण प्रहार
५.३ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प
पेट्रोलको मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन : १ को मृत्यु, ४० पक्राउ
विरोध प्रदर्शनमा ८ जनाको मृत्यु
उत्तर कोरियाले आपत्ति जनाएपछि संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित
प्रेमदासलाई हराउँदै श्रीलंकाका राष्ट्रपतिमा राजापक्ष निर्वाचित
कंगोमा विद्रोहीद्वारा १४ सर्वसाधारणको हत्या
इराकमा विस्फोट: छ को मृत्यु, तीस घाइते
कडा सुरक्षाबीच श्रीलंकाली नागरिक राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै
पूर्वी चीनमा आगलागी : ५ जनाको मृत्यु, ३ घाइते
चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
‘नरसंहार, युद्ध र तनावको कारण अमेरिका र इजरायल’
बिमलसहित ४ जना खेलाडीलाई कारबाही गर्ने एन्फा अधिकारीमाथि छानबिनको माग
काठमाडौं, ३ मंसिर । राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य बिमल घर्तीमगरसहित ४ जना खेलाडीमाथि कारबाही गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)...
काठमाडौँ, ४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १३ वर्षअघि भारतमा प्रत्यारोपित मृगौला फेर्न विदेश जाने तयारीमा छन् । तर,...
मन्‍त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदैछ, तयार रहनुहोस् : प्रधानमन्त्री ओली
फाइल फोटो काठमाडौं, ३ मंसिर । मंगलबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्...
बझाङ, ३ मंसिर । बझाङको पौवागढी क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर मंगलबार साँझ भूकम्प गएको छ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने...
काठमाडौं, ३ मंसिर । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन, प्रधानमन्त्री...
किन पतन भए मोरालेज ?
साझापोष्ट टिप्पणी/ काठमाडौं, ३ मंसीर । विश्व राजनीतिमा एक समयका क्रान्तिकारी अर्को समय प्रतिगामी, एक समयका असल शासक अर्को...
नेपाल आयल निगमको ट्याङ्कर अपहरण
काठमाडौं, ३ मंसिर । नेपाल आयल निगमले डिजेल लोड भएको ट्याङ्कर हराएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरेको...
काठमाडौँ, ४ मंसिर । मुद्दा उस्तै–उस्तै हुन्, तर व्यवहार फरक–फरक ! निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । समातिएको मान्छे पनि...